Sei ma Africa nema Africa-America vachiri "kudzikisirwa senge zvisati zvamboitika"? - Afrikhepri Foundation
min kuverenga 11 min
JIni ndinoitsaurira chinyorwa ichi kuna Vieux Boukoul, mumwe wevatungamiriri veCongolese sapology. Aive nehunyanzvi nenzira yekupfeka. Runogara rwakanaka, runogara rwakashongedzwa, rune nguva dzose, rwakachena. Mwoyo wangu uzere nekusuwa nekuti murume mukuru anga asisipo, pamwe zvishoma zvishoma. Asi "vakafa havana kufa" tsika inotitaurira. Zvakare, ndinomishuva nekudzoka kwakanaka. Dai basa rake rounyanzvi rikurudzire chizvarwa chitsva chevaimbi vekuCongolese. Kendé na kimia Papa.
Kutaura pamusoro peAfrica, kutaura pamusoro pemaitiro eAfrica ndiko kutaura nezvekunamata. Kutaura pamusoro pekunaka kweAfrica pasina mubvunzo kunotitaurira kuNZAMBI (MWARI) nokuti nokuda kwemadzitateguru edu zvinhu zvose, zvachose, zvakange zvakabatana neZimbabwe.
Saka ndinokukoka iwe kuti udzokere shure munguva uye mune tsika dzeAfrica kuedza kunzwisisa kuti sei madzitateguru edu akaisa kukosha kwazvo pakukwirira uye maitiro, uye nei isu, mbeu yavo, tichienderera mberi nenzira iyi.
I.Travel munguva yakapfuura
Icho chakavanzika chokuti veAfrica neAfrica-America vanofarira kupfeka zvakanyanya, kuti vanokoshesa chimiro uye kunaka. Mumwe angafunga kuti avo vekupedzisira ndivo vanoda zvenyama, kana kuti ivo vanofarira zvikuru chitarisiko; asi hazvina kudaro.
Zvechokwadi, kana tichida kunzwisisa kuti sei vanhu veAfrica neAfrica-veAmerica vanoda kupfeka zvakanyanya uye vanokoshesa zvikuru kukoshesa uye kukanganisa, tinofanira kutarisa tsika dzekunamata dzeAfrica. . Asi tisati tataura nezvekufunga kwemweya, ngatitenderei uye tifambe zvakare munguva.
Pane humwe huchapupu huripo munguva yakapfuura kuti vaAfrica vaiwanzoshanda uye vakashongedza here? Kumubvunzo uyu, ndinopindura mubvunzo.
Vatsvakurudzo vekuEurope vokutanga vakabva muAfrica kubva muzana remakore re14th vanotipa ruzivo rwakakosha pamusoro pekunaka kwevaAfrica vekare:
"Apo ivo (vekuEurope vaifamba nezvenyika dzeEurope) vakasvika muhombe yeGuinea ndokusvika kuVaïda, vanoyeuka muGermany anodzidza nezvemaEngland Leo Frobenius, vatungamiri vakashamisika zvikuru kuwana migwagwa yakarongeka yakagadziriswa nehurefu hwemazana akawanda nemiganhu miviri ye miti: vakayambuka kwenguva yakareba mushandirapamwe wakaputirwa neminda yakanaka kwazvo, inogarwa varume vakapfekedzwa nguo dzakatsvuka dzaive dzakagadzirwa machira ! Kuwedzera kune zasi, muUmambo hweCongo, boka revanhu rakapfeka rakapfeka silika uye velvetguru, rakanyatsorongedzerwa rinotaura zvakananga mumaminitsi, vatongi vane simba, makambani makuru. Yakasimudzirwa kumusa wemapfupa! Uye yose yakafanana yakanga iri mamiriro enyika kune kumabvazuva kwegungwa, Mozambique, somuenzaniso. "(Ona History of African Civilization)
VaAfrica vakapfekedzwa "nguo dzakanaka", Congolais vakapfekedzwa musilika uye velvet ... muzana remakore reXNIXX. Saka hezvino panobva mafirosiyo?
Zvinokwanisika here kuti vaSapologues vakangobereka zvakare, simba mukunzwisisa kwavo, tsika yekare yeAfrica. Ndinofunga zvakadaro, hongu.
Bokoko (unyanzvi uye nzira yehupenyu hwevakuru veAfrica) inodzidzisa kuti hapana chinhu chitsva, nokuti munhu haatangi, anoyeuka. Kufanana pakati pemitambo yetsika dzeAfrica nemitambo yeAfro-America inoratidza kuti vaAfrica vemuAmerica havasi ivo vanogadzira, vanonyatsoziva kuti vanoita sei, vanogadziridza uye vanogadziriswa, izvo zviripo kare mumitambo yevanhu veAfrica. Somuenzaniso, kana ukaita tsvakurudzo, uchawana zvakaenzana twerk, "danho?", iyo inosanganisira kuendesa matanho ake rhythmically uye aesthetically, mumitambo yemitambo yeAfrica.
"Vanhu vekuAfrica vanodzidza nekuona kunze kwavo pachavo; vanodzidza pane nekuyeuka ruzivo rwavainacho"Anodzokorora Malidoma Somé, mudzidzisi wekuAfrica, mubhuku rake Uchenjeri hweAfrica.
Ngatirambei tichifamba rwendo rwedu munguva yakapfuura nemunhu wechiDutch Olfet Dapper (1636-1689).
Mubasa rake Tsanangudzo yeAfrica, uyo munyori anonyora kuti:
"MuAnarea, pedyo neVolta, varume vose vari pakati peNigroes vanopfeka machira ejira yekotoni ... uye vakadzi vanopfeka hanzu yakafanana neyomurume (...) KuMonomotapa, madzimambo haashanduki mafashoni, vanopfeka jira refu refu jira rechirasi munyika; vanopfeka kurutivi rwemberi nenyoka nenyanga dzenyanga dzenzou (...) Vanhuwo zvavo vanopfeka mumucheka wekotoni uye makuru, maIndia akashongedzwa negoridhe (...) Vagari vomuumambo hweGuinea vanochinja mifananidzo yavo ita (nekotoni yavo) (...) The Negroes ye Wanqui vane ndarama uye vanoziva kuita zvipfeko zvakanaka izvo zvavanotengesa neAcanists ".
Mifananidzo miviri inoratidza zvinotsanangurwa naOlfet Dapper:
Mambo Ashanti nevadzidzisi vake
Mudzimai weAshanti nemwana
Dzokera shure zvishoma nezvishoma munguva yakapfuura. Ngatidzokerei kumazana emakore 8, makore 8oo.
Izvi ndizvo zvinonzi Fabre d'Olivet (1767-1825), munyori wenhoroondo weFrance, anotitaurira nezvevanhu vokutanga veAfrica, vakamboti vaMoors, avo vakagara muFrance kwakapoteredza zana remakore rechi9. Anonyora kuti:
"Varume vatsvene vakaonekwa kwekutanga, nekuedza kwemasango avo akapisa, varume vane ruvara rwakasiyana kubva kwavari. asi mutsauko uyu hauna kuvarova ivo voga. Varume ava vakafukidzwa nenguvo dzisinganzwisisiki, dzakaputika makumbo... "(Cf. Nhoroondo yevanhu vemarudzi)
Muzana remakore rechipfumbamwe, vaAfrica vaipfeka nguo dzinoshamisa. Saka tinoona kuti madzitateguru edu aigara "asina kumira sezvaaimboita". Uyewo, kuva nekunaka, kuva netsika ndiyo tsika yekare pakati peAfrica. Zvadaro tinogona kungotaura kuti vaifarira zvinhu zvakanaka, nguo dzakanaka. Asi zvakadzika kupfuura izvozvo.
2. Idzimu hwemweya hwekunaka kweAfrica
Zvakakosha kuyeuka kuti muBhokoko (unyanzvi uye mararamiro evanhu vekare veAfrica), musati mava nekoloni, mabasa ose emagariro evanhu aisanganisira kusimba kwemweya, ukama neChechi, ndiko kuti NZAMBI (MWARI). The Bokoko inodzidzisa kuti zvinhu zvose zvinotanga neNZAMBI uye zvose zvinoguma naYe. Inotidzidzisa zvakare kuti munhu akasika mumufananidzo weNzambi, wekutanga mudhiki, uye naizvozvo, uyu ndeye tsanangudzo muvhidhiyo musimba. Uye nokuda kwekufananidza pakati pezvinhu zviri pamusoro uye zviri pasi, munhu ane basa, kana risina basa, kuti aite muviri, kuwedzera uye kubereka, pano pasi apa, UMwari Hwakanaka.
Anofanirwa, saNZAMBI (MWARI), uyewo anosika unyanzvi. Nokuti Zvisikwa inyanzvi. Zvinhu zvose zvakasikwa zvakajeka. Ndicho chikonzero vaAfrica vachigara vachitsvaka runako, aesthetics, kukanganisa nekubatana mune zvose zvavanoita.
Tinogona kuona izvi munzvimbo dzakawanda. Somuenzaniso ...
Masvingo eSudanese - Mufananidzo - Alesk
Kassena Architecture - Photo - Rita Willaert
In the hairstyle ...
Mufananidzo - http://renaudossavi.mondoblog.org
Elegance Hamar - Photo - Kairoimage
Elegance Peul - Photo - Tuul & Bruno
Yoruba Elegance - Mufananidzo - https://sarahamla.wordpress.com
Kongolaise Elegance - Photo - LisaClarke
Ichi chinodikanwa kuva nguva dzose chine tsvina uye chakachena, chinotsanangurwa nechokwadi chokuti muBokoko (unyanzvi uye mararamiro evanhu vekare veAfrica) muviri wevanhu unonzi se temberi. Tembere umo NZAMBI (MWARI). unogara. Somuenzaniso, muLingala, mutumbi ndiNZOTO.
Mune rimwe bhuku rakanaka kwazvo rinonzi MUKULU, mutauro wemadzitateguru eAfrica, Ya Elima, chiremba uye muvambi wemutambo weAnchoring dance, anotidzidzisa izvi:
"NZOTO (Inzo) zvinoreva "imba"; Kunoreva "isu, isu". Nokudaro NZOTO (Muviri Wedu) inogona kushandurwa se "imba yedu". Sei "muviri" wedu, kwete "muviri" wangu? Nei chizhinji, uye kwete icho chimwe? Ziva kuti mumuviri, haagari chete KA (munhu mumwe chete), asiwo MOZALI (Uyo Uyo ari, MWARI). Mumumuviri, MOZALI anozvionera pachake kuburikidza nemunhu oga, izvo zvinomuratidza MOZALI. NZOTO (Muviri Wedu) tembere umo simba rose rinotendeuka. Anomiririra zvose zvisikwa mudiki"
Uyezve, nokuti NZAMBI (MWARI) anogara mumuviri wedu, zvaive zvakakosha kumadzitateguru edu kuti ave nguva dzose akachena uye akafukidzirwa nenguo dzakanaka uye dzakanaka. Kana kune VaKristu, vaMuslim, zvakakosha kuti kereke kana musikiti ive yakachena, yakagadzirirwa zvakanaka uye yakachengetedzwa zvakanaka nokuti munzvimbo idzi vakatendeka vanotaurirana naMwari; kune vekare veAfrica, zvakanga zvakakosha kuti muviri wemunhu uve wakachena, wakapfeka zvakanaka uye wakachengetedzwa zvakanaka sezvo iri imba yaZAMBI (MWARI). Ndokusaka vaimbopfekedza nguo dzakanaka uye dzinoshamisa.
Iyi tsika yakasara pakunamata uye Maafa (kutengesa varanda) uye yakaparidzirwa kusvikira nhasi. Ndicho chikonzero vanhu veAfrica neAfrica-America vanokoshesa maitiro, nguva dzose vanoda kuve vakanaka uye vakapfeka zvakanaka. Iyi inzira yekukudza NZAMBI (MWARI).
Uyezve, hazvisi nyore kuti Swag yakagadzirwa nevaAfrica-America. Kubva pane zvandaigona kuverenga pamusoro pemumbure, inouya kubva mumutauro weChirungu "Swagger" izvo zvinoreva "nzira yokuzvipa nayo kune nyika nekuvimba uye nemhando. "
Zvinenge zvose zvese zveAfrica -America "zvinogadzira" munharaunda yekugadzira ine magwaro mumitambo yeAfrica. Ikokupedzisira inotora pfungwa dzavo dzekunzwisisa uye zvisikwa Bakoko (madzitateguru). Kuva netsika pamusha zvakare chinhu chitsvene.
Zvisinei, musaita amalgams !!
MuBokoko (unyanzvi uye mararamiro evanhu vekare veAfrica), kuve wakashongedza uye kushingaira hazvirevi kupfekedza zvipfeko zvakanyanya zvepamusoro uye kuzvirumbidza kune wese wose kuti " ". Nokuti mutengo wezvokupfeka hauzivi kuti tiri vanaani uye hauna kukanganisa kukosha kwedu. Bokoko inodzidzisa kuti isu tiri pamusoro pezvinhu zvose zvemweya. saka, kukoshesa kwedu kunokosha uye izvozvo hazvibatsiri mutengo uye mararamiro ezvokupfeka. Chinokosha, ini ndinotenda, ndiko kuchena, kukwidzika uye aesthetics iyo yatinopfeka zvipfeko.
Ndiyo mupfungwa iyi yandinokoshesa zvikuru nzira yekutenderera yeHama Nafoor Qa'a. Iyo yekupedzisira inoronga mwedzi mumwe nomumwe kutengesa kwemahombekiti emuzambiringa wehutano hwakanaka, unyanzvi, pamutengo unodhura. Ndiri kufunga kuti ari kunonoka muBokoko. Click ici ou ici kuti aone zvaanoita.
Mukupedzisa, kuva nechimiro, "kusaderedzwa sezvakamboitika", zvinokosha zvikuru kana zvisiri zvitsvene kuvaAfrica nehama dzavo duku, African-Americans. Hazvisi zvekunyama asi nekuremekedza Nzambi (Mwari) watinogovana naye muviri wedu ...
Kubatana nehupenyu hwese - Eckhart Tolle (Audio)
Tarisa Funga semurume futi (2014)
Bata pane zvepabonde alchemy - Samaël Aun Weor (PDF)